ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေဒီတိုင်း ပြည့်ဝဖို့လိုမယ့် အာဟာရဓာတ်တွေက ဘာတွေများလဲ.......... - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း » မိခင်ကျန်းမာရေး » ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေဒီတိုင်း ပြည့်ဝဖို့လိုမယ့် အာဟာရဓာတ်တွေက ဘာတွေများလဲ……….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေကိုယ်တိုင်ရော ဘေဘီလေးပါကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေဒီတိုင်း လုပ်ရမယ့် ကိစ္စကတော့ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ မေမေရော ဘေဘီလေးပါကျန်းမာစေဖို့ မေမေကလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုပြည့်ဝအောင်စားသုံးတာပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပြည့်ဝဖို့လိုအပ်မယ့် အာဟာရဓာတ်တွေက ဘာတွေများလဲ…….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အာဟာရပြည့်ဝမှုက ဘေဘီလေးကျန်းမာပြီး အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးနိုင်စေဖို့ တော်တော်လေးအရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာဖွံ့ထွားတဲ့ ဘေဘီလေးမွေးဖွားချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မျာ အာဟာရတွေပြည့်ဝအောင်စားသုံးဖို့လိုပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မဖြစ်မနေပြည့်ဝသင့်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေက အများကြီးတော့မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာတွေဖြစ်မလဲတူတူကြည့်ရအောင်လား……..
ဖောလိတ် ဒါမှမဟုတ် ဖောလစ်အက်ဆစ်
ဘေဘီလေးမှာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်မရှိအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖောလိတ်က ဗီတာမင် B အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အာရုံကြောတွေကို အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေသလို ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးကို လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်မှာရော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတလျှောက်လုံးမှာပါ တစ်နေ့ကို ဖောလစ်အက်ဆစ်ပမာဏက ၄၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်လိုအပ်မှာပါ။
ဖောလစ်အက်ဆစ်ပြည့်ဝစွာရရှိစေဖို့ဆိုရင် ဖောလစ်အက်ဆစ်ဖြည့်ထားတဲ့ cereals၊ အစိမ်းရင့်ရောင်အရွက်တွေ၊ အချဉ်သီးတွေ၊ ပဲအမျိုးမျိုးတို့ စားပေးလို့ရပါတယ်။
မေမေရော ဘေဘီလေးပါ အရိုးတွေကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ပါ။ အရိုးနဲ့သွားတွေ ကြံ့ခိုင်စေဖို့ ကယ်လ်ဆီယမ်က မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ပါ။ ကယ်လ်ဆီယမ်က သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေနိုင်သလို ကြွက်သားနဲ့ အာရုံကြောစနစ်တွေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေဒီတို့အနေနဲ့ တစ်နေ့တာကို ကယ်လ်ဆီယမ် ၁၃၀၀ မီလီဂရမ် ရရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကိုက်လန်၊ ကယ်လ်စီယမ်ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ cereals တို့ကို စားပေးလို့ရပါတယ်။
အရိုးတွေ သန်မာမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဘေဘီလေးရဲ့ အရိုးနဲ့သွားတွေအကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ တစ်နေ့တာကို ဗီတာမင် D ၆၀၀ international units (IU) ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။
ဆယ်လ်မွန်လိုမျိုး အဆီများတဲ့ငါးတွေ၊ ဗီတာမင် D ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ နို့၊ လိမ္မော်ရည်တွေကို သောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ဘေဘီလေးကောင်းမွန်စွာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့ အရေးပါ ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ တစ်နေ့တာကို ပရိုတင်း ၇၁ ဂရမ် ရရှိဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
အဆီမပါတဲ့အသား၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အခွံမာသီး။ အစေ့အဆန်တွေ၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကနေရရှိနိုင်ပါတယ်။
သံဓာတ်က သွေးအားနည်းရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ hemoglobin တွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဘေဘီလေးဆီ သွေးနဲ့ အောက်ဆီဂျင် အလုံအလောက်ရောက်စေဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ သံဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သံဓာတ်မပြည့်ဝဘူးဆိုရင် သံဓာတ်ချို့တဲ့ပြီး သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်စေနိုင်သလို မအီမသာဖြစ်တာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သံဓာတ်ချို့တဲ့မှု ပြင်းထန်မယ်ဆိုရင် လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးဖွားတာ၊ ပေါင်မပြည့်ဘဲ ကလေးမွေးဖွားတာ၊ ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ တစ်နေ့တာကို သံဓာတ် ၂၇ မီလီဂရမ် ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သံဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့ အဆီမပါတဲ့ အနီရောင် အသား၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ သံဓာတ်ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ cereals၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းနုနွယ်တို့ကနေ သံဓာတ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရေးပါပါတယ်။ ဘေဘီလေး ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ တစ်နေ့တာကို အိုင်အိုဒင်းပမာဏ ၂၂၀ ကနေ ၂၅၀ mcg လိုအပ်ပါမယ်။
အိုင်အိုဒင်းပြည့်ဝစေဖို့ဆိုရင် အိုင်အိုဒင်းဆား၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ပင်လယ်စာနဲ့ အချို့သော ပေါင်မုန့်တွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Pregnancy diet: Focus on these essential nutrients https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/pregnancy-nutrition/art-20045082 Accessed Date 13 February 2020
Pregnancy and Prenatal Vitamins https://www.webmd.com/baby/guide/prenatal-vitamins#1 Accessed Date 13 February 2020
Vitamins and supplements during pregnancy https://www.pregnancybirthbaby.org.au/vitamins-and-supplements-during-pregnancy Accessed Date 13 February 2020